KorEPS information for Myanmar: လုပ်သက်ဆုကြေး (ပြည်ထွက်) အာမခံ ၊ အလုပ်သမားထံမှ ဖြတ်ရန်မဟုတ်
Information of Korean Employment Permit System for Myanmar
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 19:47
19 May 2015 at 04:28
29 September 2019 at 04:57
Harris Clerk said...
Doxycycline 100mg Capsule is utilized to treat many diverse bacterial infections, for example, acne, urinary tract infections, intestinal infections, respiratory infections, eye infections, gonorrhea, chlamydia, syphilis, periodontitis, and others.
19 December 2020 at 02:06
ရွှေပွဲလာများအတွက် EPS နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း ၊ ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာ စသည်များကို ဟန်းဂုရွာ ဘလော့ တွင် ကြိုးစားတင်ပြခဲ့ပါသည် ။
သို့ရာတွင် ရွှေပွဲလာ ညီအစ်ကိုများက လွင့်တင်ထားပြီး အကြောင်းအရာ ဟောင်းများကို ရှာဖွေရန် ခက်ခဲကြောင်း ငြီးတွားကြပြီး ၊ ၄င်း လွင့်တင်ထားပြီး အချက်အလက်များ ကိုပင် အီးမေး လ်၊ ဖုန်းတို့ဖြင့် ထပ်ပြန်တလည်လည် မေးမြန်းလာကြပါသည် ။
၄င်းအခက်အခဲများ ပြေလည်စေလိမ့်သောငှါ ဟန်းဂုရွာရှိ အီးပီအက်စ်နှင့် ပတ်သက်သော ပို့စ်များကို ပြန်လည် စုစည်း၍ ဤဘလော့တွင် ထပ်မံလွင့်တင် လိုက်ပါကြောင်း ။
Act of KorEPS
ကိုဝိုင်းကြီး ထွဲဂျစ်ကွမ့် ဘယ်လိုတွက်သလဲဗျ သမ္မတ နိုမုဟျောန်း လက်ထက်မှာတော့ အင်န်ဂျီအိုတွေ ငွေ ရွှင်ခဲ့လို့ ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ သိမှတ်...
ကိုဝိုင်း(မိုးညှင်း) လုပ်သက်ဆုကြေး ( 퇴직금 ) ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားတိုင်း ထွယ်ဂျစ်ဂွမ့် ( 퇴직금 ) ဆိုတာကို သိကြပြီးဖြစ်လိမ့်မ...
ဗီဇာကြီး နှင့် နောက်တိုးဗီဇာ ကိုရီးယားမှာ အီးနိုင်း(E-9)ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ အီးပီလုပ်သားများရဲ့ ဗီဇာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၊ နည်းနည်းပြောစရာရှိလ...
၂၀၁၃ ခုနှစ် အလုပ်သမားများ အခြေခံလစာ (အနည်းဆုံးလုပ်ခ) ၁ နာရီ ၄၈၆၀ ဝမ် ၊ ယခင်နှစ်ထက် ၆ဒသမ၁ ရာခိုင်နှုန်း တက်
၂၀၁၃ခုနှစ် (ဇန္နဝါရီလ၁ ရက်မှ ဒီဇင်္ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ထိ) အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်သမားများ အခြေခံလစာ (အနည်းဆုံးလုပ်ခ) ၁ နာရီ ၄၈၆၀ ဝမ်အဖြစ် ပြောင်...
ကျနော်တို့တစ်တွေ ကိုရီးယားမြေကို ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်တွေ တစ်သီတစ်တန်းကြီးနဲ့ လာခဲ့ကြတာပါ ။ သို့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ခုသော အချိန် အတိုင်းအတာ...
EPS လုပ်သားများ အီး-၇ ဗီဇာ ဘယ်လိုလျှောက်ထားရမလဲ
(E-7 : Special Designated Activities VISA) ကိုရီးယားနိုင်ငံအစိုးရသည် အီး-၇ ဗီဇာကို အထူးအလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာ (Special Designated Activities VIS...
အီးပီ အစရှိသည့် အလုပ်သမား လူရည်ချွန်များကို ကိုရီးယားတွင် အထူးနေထိုင်ခွင့်ပေးမည်
ကိုရီးယား အစိုးရသည် အကျော်အမော် နိုင်ငံခြားသားများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်း အခြေချနေထိုင်ခွင့် ရရှိရေးအစီအစဉ်အဖြစ် ပွိုင့်စနစ်ဖြင့် အခြေချေ...
အလုပ်ခွင်ထိခိုက်မှု လျော်ကြေးအာမခံ နှင့် အလုပ်နားထောက်ပံ့ကြေး ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲ
Hanwinmaw ရဲ့ အီးမေးလ် ကိုဝိုင်း ခင်ဗျာ ကျွန်တော် က Busan, Gijang, Jeonggwan မှာရှိတဲ့ ဂျွန်ချော၇ီ လို့ခေါ်တဲ့ သံချောင်းတွေ ၊သံ...
ကိုရီးယား အီးပီ လုပ်သားတိုင်း သိထားသင့်သော ပြည်ထွက်အာမခံကြေး (၂)
စကားချီး ဤ ဆောင်းပါးသည် ကိုရီးယားအစိုးရက လက်ရှိ မောင်းနှင်နေသော အီးပီစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြည်ထွက်အာမခံ (출국만기보험•신탁) စနစ် နှင့် ...
2013-KIIP (Korea Immigration and Integration Program) သင်တန်းများမကြာမှီဖွင့်လှစ်မည်
ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (F-5) ၊ အခြေချနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ(F-2) နှင့် အထူးအလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာ(E-7)တို့ လျှောက်ထားရာမှာ “ကို...
Copyrights:wyne1969@gmail.com>>. Powered by Blogger.